Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic. Ingxenye 7 neyokugcina: ukufakwa okuhle | Kusuka kuLinux
Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic. Ingxenye 7 neyokugcina: ukufakwa okuhle
Lolu chungechunge olude kakhulu lwamakholomu (ingxenye 1, ingxenye 2, ingxenye 3, ingxenye 4, ingxenye 5 y ingxenye 6) kuzoba nesiphetho lapha. Nginganweba kwezinye izinto zedeskithophu ye-semantic, kepha ngeke ngikwazi ukuphendula izimpikiswano ezinikezwa ngemithwalo yemihlahlandlela esakazeke kuyo yonke i-Intanethi eyeluleka ngezindlela ezinhle zokucima ideskithophu ye-semantic, ngoba izodla inkumbulo ngocezu.
Ungakhathazeki, ukuphela kwendlela ongabamba ngayo njengale oyibona ohlelweni lapho iNepomuk isebenza kahle njengami ukwenza okufanayo nami: landa i-1 GB kumafayili wombhalo we-PDF anamakheli ayizigidi eziyi-13 bese uwaqhuba ngesikhombi seNepomuk (angidlali, ngikwenzile). Futhi angikholwa ukuthi uphatha ama-PDF ezinkulungwane zamakhasi ngokoqobo (ngomsebenzi wami njengommeli kufanele ngiphathe Umlando woMthethosisekelo waseChile, ama-PDF ayi-10 anamakhasi ayi-1.200 wombhalo ngamunye), ngakho-ke, ohlelweni olulungiswe kahle, kufanele angikuboni lokhu kuke kwabanjwa.
Manje ake sithathe ngokungathí sina nangobuchwepheshe. Akusona isikhathi sokunye ukufundiswa kokuthi "khubaza iNepomuk ukuze uthole ukusebenza okuhle", kodwa okokufundisa kokuqala kwi-inthanethi kokuthi "ungathola kanjani ukusebenza okuhle ngeNepomuk kuvuliwe". Lalela.
2 Ukulungisa umhlabathi
6 Kepha iNepomuk isahamba kancane kakhulu engingayithanda. Engikwenzayo?
Mhlawumbe lokhu bekufanele kufike kuqala kumhlahlandlela wami, futhi ngiyaxolisa, kepha bekufanele ngenze izizathu zokuthi kungani ngisebenzisa i-Nepomuk (okuyilokho engikwenze kwizitolimende zokuqala eziyisithupha) ngaphambi kokukutshela ukuthi ungayisebenzisa kanjani kahle. Ngakho-ke, sizothatha uhambo lokudingekayo, bese sizolungisa.
Okokuqala, sidinga ukuqina ngokwabiwayo esizokusebenzisa. Nazi izidingo ezicace bha: ukwabiwa okuthanda ukufaka isoftware engasasebenzi akusebenzi i-KDE, futhi lokho ngeshwa kufaka iDebian. Ngenxa yomsebenzi omkhulu kaRex Dieter, umholi weqembu leFedora KDE, kukhona iqoqo lamaphakeji ane-KDE 4.10 yeRed Hat Enterprise Linux 6, ngakho-ke uma udinga i-KDE nokusatshalaliswa okuzinzile kwedwala, inketho yi-RHEL 6, noma i-RHEL 6 clone efana ne-CentOS, naleyo ndawo yokugcina inikwe amandla.
Okwesibili, kufanele unake ukuthi i-KDE ihlanganiswe kanjani, ngoba i-KDE izwela kakhulu ekupakisheni okungalungile. Kuze kube muva nje, uKubuntu ubedume kabi ngokwenza amaphutha amabi okupakisha, ahlanganisa izinhlobo ezingasekelwa zamaphakeji adingekayo, okuholele ekuhlangenwe nakho okwesabekayo kweKubuntu nabantu bezibuza ukuthi kungani iNepomuk ihamba kancane nenkumbulo ilambile kanti empeleni bekuyiphutha le-packer. Ichungechunge lokusakaza leNepomuk ne-Akonadi yilokhu (kusetshenziswa amagama wephrojekthi avela kumaphrojekthi.kde.org nezinguqulo zakamuva)
Isikhathi sokusebenza se-kde (4.10.4)
amawijethi we-nepomuk (4.10.4)
Ukunakwa kwabangu-3 bokugcina: abancikile enguqulweni ye-KDE esetshenzisiwe, futhi kufanele babe ngabokugcina abatholakala, noma ngabe basebenzisa inguqulo yephoyinti elizinzile. Umthetho uwukuthi: I-KDE isebenzisa inguqulo yakamuva yalawa ma-package egatsheni layo elizinzile, kanye nezithombe ze-git emagatsheni ayo e-beta. Ama-repostories amaningi wokuvuselela we-KDE abuyekeza i-KDE, kepha hhayi lawa amaphakheji amathathu okugcina, adala izinkinga ezinkulu.
Kungezwe kulokhu uStrigi, osanda kuthathwa kuNepomuk, okwakuyikhanda langempela kubo bonke abazama ukukupakisha. Izinhlobo ezintsha azange zikhangiswe kahle, futhi Ubuntu abuzange bupakishe izinhlobo ezintsha zalolu hlelo isikhathi eside, kwaze kwaba yilapho kufanele ngidale umsindo kubhulogi kaSebastian Trüg ukuze ngilungise. Ngenhlanhla, le nkinga iphelile, futhi iStrigi ayisabuyekezwa kakhulu, okususa inkinga yokupakisha.
Ngalesi sizathu, ngincoma uChakra njengokwabiwa okuhle kwezinkomba. UManuel Tortosa, umphakeli we-KDE weChakra, uyakwazi konke lokhu, ngakho-ke ikhwalithi yamaphakeji muhle, futhi ulwazi ngoNepomuk no-Akonadi, ngaphansi kukaChakra, nalo luhle. I-Chakra inokulinganiselwa okuthile okungathi sína, njengoba kungazenzakaleli kumaphakeji ancike ku-GTK +, kepha kuyisiqalo esihle.
Futhi, njengoba sizobona ngokulandelayo, ngincoma kakhulu ukusatshalaliswa osekuvele kwenziwe ushintsho kusuka ku-MySQL kuya eMariaDB. Sizobona ukuthi kungani kamuva.
Lapho sesiqinisekisile ukuthi sihlangabezana nakho konke okudingekayo, futhi inqobo nje uma sinohlelo oluhlanzekile, sizokwenza ushintsho kuzilungiselelo ezizenzakalelayo.
Sizobeka imigqa elandelayo kufayela le- .local / share / akonadi / mysql.conf.
ukuvumelanisa_binlog = 1 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
Uma leli fayela lingekho, sizoqala i-Akonadi ukulakha, bese silivala. Kwikhonsoli:
akonadictl qala akonadictl stop
Kwalokhu? I-MySQL (noma iMariaDB) yi-database esekela i-Akonadi, futhi i-MySQL ayikuthandi ukuphazanyiswa okungazelelwe. Uma kwenzeka noma yikuphi ukuphahlazeka kwesistimu noma ukucishwa kukagesi, i-MySQL izokwethula amaphutha ku-database ye-Akonadi, futhi lawa maphutha, aqongelelwe, azogcina engashisi i-KMail, okwenza ukusetshenziswa kwayo kungasheshi ngendlela engabekezeleleki. Lezi zinketho zisho ukuthi ukuthengiselana ngakunye kubhalwa ngokushesha kudiski, kunciphisa ubungozi benkohlakalo ku-Akonadi uma kwenzeka kuphahlazeka uhlelo noma inkohlakalo. Le nketho idala amaphutha ngezinguqulo ezithile ze-MySQL, kepha isebenza kahle kakhulu noMariaDB.
Sizokhuphula ukuqapha kwefayela kumkhawulo ophakeme, ukuthuthukisa kakhulu ukusebenza kukaNepomuk. Inketho elandelayo kufayela /etc/sysctl.conf izokwenza lo msebenzi
Ngemuva kwalezi zinto ezimbili, sizokwenza kusebenze iNepomuk. Lokhu kwenziwa ku- Izintandokazi Zesistimu | Ukusesha kwe-Desktop. Masigcine ukusetshenziswa kwememori kuzilungiselelo ezizenzakalelayo bese sivula inkomba ye-imeyili. Ungakhohlwa ukubheka amathiphu engxenye 1 yokuthi singakusheshisa kanjani ukufaka izinkomba, futhi ngemuva kwalokho… hlola eminye imikhombandlela, ukujabulela ideskithophu ye-semantic!
Kuthiwani uma besingakwazi ukuvimbela ukonakala kwedatha ye-Akonadi futhi iNepomuk ihamba kancane? Kusekhona umugqa owodwa wokuzivikela owenziwe yi-KDE 4.10: Nepomuk Cleaner, ngaphezu kwamathuluzi wokuzihlanza awaziwa kancane u-Akonadi anawo.
$ akonadictl vacuum: "Khipha" i-database ye-Akonadi. Ngokufisa, kuqondwe: konke okufakiwe okungakhonjiswanga kusisetshenziswa kuyasuswa.
$ akonadictl fsck: Zama ukulungisa ukonakala kwemininingwane yolwazi ye-Akonadi. Lokhu akusebenzi ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke udinga ukukuvimbela ukuthi kungenzeki kwasekuqaleni. Kanjani? Ngezinketho esele sizibonile.
$ nepomukcleaner: Kuyisethi yemibhalo elungiselelwe nguVishesh Handa ukuhlanza i-database yeNepomuk, ayiguqulela esibonakalayo sokuqhafaza. Shaya inkinobho "Qala" bese ukhohlwa ngakho. Ukuqalisa lolu hlelo kuyimpoqo uma umuntu evuselela inguqulo ye-KDE.
Ngawo wonke ama-trinket, kusistimu engama-64-bit, nangezinsizakusebenza zokuhlola ze-Akonadi, isamba seNepomuk ne-Akonadi sidla cishe ama-350MB we-RAM. Okuningi kwabanye, kepha kwanele, ngokombono wami, ngokusebenza okuhle okutholakalayo.
Kepha iNepomuk isahamba kancane kakhulu engingayithanda. Engikwenzayo?
Linda isikhashana. I-KDE 4.11 ifaka ukwanda kokusebenza kwesilo seNepomuk. Lokhu akulona uhlobo lokweqisa: ngokwezibalo zikaVishesh Handa, sikhuluma izikhathi eziphindwe ka-5 ukusebenza kwe-KDE 4.10 ngokubhalela i-database, futhi ngaphezu kwezikhathi eziyi-7 ekufundeni, konke lokhu, ngokwesilinganiso. Izinguquko ezizobonwa ku-KDE 4.11 zinkulu futhi zizovumela iNepomuk ukuthi isetshenziswe, ekugcineni, njengenye indlela yalezo zinhlelo zokusebenza ezidinga yolwazi.
Futhi, isinambuzane esivimbela ukuqala okulungile kwesixhumi se-Akonadi-Nepomuk sesivele silungisiwe egatsheni le-4.11, futhi isihlanzisi seNepomuk sizobona ukuthuthuka okukhulu. Sizoba nesikhombi esisha sefayela leHhovisi, futhi sizokwazi ukujabulela amanye amathuluzi azokwambulwa ngokuhamba kwesikhathi.
Ngiyethemba ukuthi lo mhlahlandlela, ngiyaphinda, okuwukuphela kwawo ozowuthola wokuthi ungakufinyelela kanjani ukusebenza okumangazayo nge-Nepomuk ocushiwe, kukusiza ukuba ube nokumisa okushelelayo, okukuvumela ukuthi wenze lokho esikubonile kwizitolimende ezedlule nokunye okuningi. Ngiyabonga ngokungilandela kuzo zonke lezi zitolimende, futhi ngibonga kakhulu uPablo Castagnino, ngokushicilela lolu chungechunge. Sizobonana maduze.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic. Ingxenye 7 neyokugcina: ukufakwa okuhle
Umnikelo omuhle kakhulu u-Ernesto! Ngiyabonga ngokwabelana ngakho konke lokhu kudilivwa, kungisizile okuningi ukuqonda kangcono ukuthi i-KDE isebenza kanjani (lapho ngisaqala nje) nokuthi ngiwasebenzise kanjani kangcono wonke amathuluzi elihlinzekayo.
Ngiyabonga kakhulu ngakho konke ukulethwa, kube usizo kakhulu. Ngisebenzisa i-KDE 4.11 ku-Arch futhi ngiyakuqinisekisa, nepomuk yisilo, ukukhomba akukaze kusetshenziswe ngaphezu kwe-7% ye-AMD Dual-Core yami yakudala.
Ngendlela, ngifundile ukuthi kulabo abanama-gigabyte ama-4 noma ngaphezulu we-RAM kungcono ukwabela iNepomuk okungenani ama-megabyte angama-500, ngale ndlela ukusetshenziswa kwe-CPU kuncishisiwe nejubane lohlelo - ezinhlelweni zokuvula, ukukopisha amafayela, njll. Ucabangani ngalokhu?
Ngiyabonga kakhulu ngochungechunge lwezindatshana, oluphelele kakhulu futhi olunemininingwane futhi lusisiza ukuthi sithole okuningi ku-KDE namathuluzi ayo. Ngakolunye uhlangothi ngifuna ukukubuza umbuzo, ngizamile ngemiyalo emibili ye-Akonadi; "I-Akonadictl vacuum" ne "akonadictl fsck" uma ngiyisebenzisa njengomsebenzisi ojwayelekile ayibuyisi lutho futhi uma ngiyisebenzisa ngeSudo ibuyisela lokhu
Ibhasi leseshini le-D-Bus alitholakali!
0: akonadictl(_Z11akBacktracev+0x34) [0x417c24]
nochungechunge lwemininingwane efana nolayini wesibili (ebengingafuni ukuyengeza ngoba mfushane), kusho ukuthini lokhu? Uma uma uyisebenzisa njengomsebenzisi ojwayelekile ingabuyisi lutho, kusho ukuthi i-database iphilile? noma lo myalo awusebenzi njengomlawuli?
Ngiyaphinda ngiyabonga futhi ngiyabahalalisela ngalezi zihloko futhi ngiyethemba ukuthi umsebenzi wakho njengommeli uhlobene noshintsho lomthethosisekelo eChile, obekudingeka isikhathi eside.
Kokuhlangenwe nakho kwami, ngohlelo lwama-64-bit, indawo emnandi isabelo esingu-128MB esiya kuNepomuk (amanye ama-350MB cishe avela ku-Akonadi, MySQL, kanye nezinsizakalo ezihlobene). Ukudlulela ngalapho kuzomane kunikeze uNepomuk inkumbulo engaphezulu yokudla, ngaphandle kwalokho ukuhumushela ekusebenzeni kwangempela kukhuphuka.
Le parameter yayifaneleke ngokuphelele ezinsukwini ze-KDE 4.7, lapho izinsizakalo zazingathuthukiswa futhi iVirtuoso, i-database engemuva kweNepomuk, yayidinga inani elikhulu lememori ukuze lisebenze. Akunjalo.
Sawubona Carlos, ngenkathi u-Ernesto ephendula, ngizokutshela ngokuhlangenwe nakho kwami ​​nge-OpenSuse. Ngempela, futhi njengoba usho, ivula i-KDE, ehumusha ibe yindawo ezinzile, ethembekile futhi edidiyelwe kakhulu nohlelo, ngokuqondene nokuvuselelwa, lokhu kufika cishe inyanga ngemuva kokukhishwa yithimba le-KDE, noma kunjalo ungabuyekeza inguqulo yamanje evela ezinqolobaneni ezisemthethweni ezinakekelwa umphakathi, kuze kube manje ngivuselele ukusuka lapho futhi angizange ngibe nezinkinga, kepha kunemininingwane futhi yilokho u-Ernesto akhombisa kumhlahlandlela wakhe maqondana nokupakisha nezinguqulo ezitholakalayo , isibonelo, amakhosombe we-KDE asemthethweni nasesisikhulu ku-OpenSuse aqukethe inguqulo 2.9.0 yephakeji yeSoprano, kepha kungenxa yokuthi amanye amaphakheji asenguqulweni yawo yakamuva, ngingaxazulula ngokushesha okungenhla ngokusesha nokulanda inguqulo 2.9.1 kuwebhusayithi ye-OpenSuse Build Service (okuthile okufana neSikhungo Sesoftware). Ekuqaleni ngiphawule ukuthi iqiniso lokuthi uSuse ukhethe i-KDE njengemvelo ezenzakalelayo kuholele ohlelweni oluthembekile futhi oluzinzile, yilokhu engikushoyo ngokuqhathanisa nokusabalalisa kwangaphambilini engikusebenzise ne-KDE: Fedora, ebisebenza ngokushesha kune-OpenSuse kepha ikhokhisiwe njengoba ngincoma ukuzinza, amahlandla amaningi ngihlushwa ukuphahlazeka futhi nezikhathi lapho ngenze kusebenze khona uNepomuk no-Akonadi bekungokunye ukwamukela izaziso zamaphutha, ukuqala kabusha ngenkani nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza.
Namuhla, futhi ikakhulukazi ngenxa yalolu chungechunge lwezihloko, nginohlelo oluzinzile, olusheshayo futhi oluhlanganiswe kakhulu.
Kubonakala kimi ukuthi sonke esifike e-Opensuse sisuka kwenye indawo sithola ukuthi udaba lwezinqolobane nokuphathwa kwazo ludideka, kepha njengoba usho, kuyindaba yokulalelisisa nokubekezela ngoba ngemuva kwesikhathi ugcina ukuyiqonda nokwazisa izinzuzo zayo, kuyiqiniso futhi ukuthi kunzima kakhulu ukuthola imibhalo ye-Opensuse ngokuqhathaniswa ne-Debian, Ubuntu noma i-Arch, kepha umphakathi usebenza kakhulu futhi kunamabhulogi amaningi azinikele kakhulu ku-OpenSuse (Le distro kudala ukushiseka ngokweqile) futhi esiteshini se-IRC bahlala bekulungele ukukusiza.
Akuyona inhloso yami ukuhlanekezela isihloko salokhu okuthunyelwe futhi ngithemba ukuthi ngizoba nemvume kaPablo no-Ernesto ukukushiyela izixhumanisi ezingakusiza kuwe, uqobo bangisize kakhulu. owokuqala uvela kundatshana ekhuluma ngezinqolobane eziseSuse nokuthi ungaziphatha kanjani ukuze uthole uhlelo oluzinzile, oluphelele nolubuyekeziwe kanti elinye ikhasi le-blogger elinikela ngengxenye enhle yokukhuluma nge-Opensuse.
Ngiyethemba bazoba usizo kuwe.
UCarlos Alvarez Atanes kusho
Ngabe ungathola okumanzi kancane ekusatshalalisweni okuhle kweLinux kwideskithophu ye-KDE?
Ukhuluma ngeRed Hat, ngabe lokhu kusebenza kuFedora? I-OpenSuse ibonakala ikhetha i-KDE kudeskithophu yayo ngokuzenzakalela. Kunjani lokhu kusatshalaliswa? IMageia nayo isendaweni efanayo. Mhlawumbe i-PcLinuxOS? Ngiyabonga kusengaphambili.
Phendula uCarlos Álvarez Atanes
Ngiyabonga Moscosov. Njengamanje ngine-OpenSuse. Ngivela kwaDebian futhi ngimusha ku-OpenSuse (izinqolobane ezihlukile, amathuluzi wokufaka izinhlelo, njll.) Futhi noma ngiyivivinya, iyazisungula njengokwabiwa. Ngikuthola kuzinzile impela, cishe konke kuhamba kahle (ngaphandle kwenkinga ethile ekutholeni imibhalo kanye "nezixazululo" zezinkinga, okwakungatholakala eDebian). Manje, engicacayo ngakho, njengoba ngiyifakile esikhundleni seGnome, ukuthi nginamathela ku-KDE. Futhi kuze kube seqophelweni lokuthi phakathi kokukhetha ukusatshalaliswa phambi kwedeskithophu, ngibeka phambili izinzuzo zokusebenzisa ideskithophu ngaphezu kwalokhu ukusatshalaliswa okungaba nakho kukodwa.
Ukuphathwa kwephakeji ku-Debian kubonakala kulula kimi: main, contrib, non-free futhi lapho unakho cishe konke; ku -useuse kungibiza kakhulu (i-pacman, ifektri ...), yize ngicabanga ukuthi kuyindaba yokukujwayela nokunaka kancane. Kepha sengivele ngasho, uma lesi kuyisijeziso sokuba ne-KDE ngokusebenza kangcono nokusetshenziswa, ngiguqula ukusatshalaliswa. Kungakho futhi ngiphakamise abanye abanjengoMageia, abazuza njengefa i-KDE njengedeskithophu evela eMandriva nokukhululeka kwayo kokwenza konke kusebenze ngaphandle kwebhokisi. Ngiyayithanda futhi ukuthi ngemuva kwayo inesisekelo sesitayela se-Debian (ngiyakuhlonipha lokho, kepha sengibuyile ku-Canonical; futhi nginokukhathazeka ngeNovell ... nokuncane ngeFedora).
Lokho kusho, Moscosov, ngiyabonga ngalo mbiko.
Akunalutho emhlabeni ongazisebenzisi ngeSudo, akusebenzi.
Kujwayelekile ukuthi kungabuyiswa lutho. Okufanele ukwenze uma usuqala leyo miyalo linda. Uma uqalisa uhlelo lokuqapha uhlelo ngemuva kokuqalisa leyo miyalo (okuthile okungenziwa ku-KDE ngokucindezela u-Control + Esc) uzobona ukuthi ukusetshenziswa kwe-MySQL's CPU kuyenyuka ngemuva kwalokho; lokho kusho ukuthi u-Akonadi uyasebenza. Yiyeke.
1. Ngenkathi lo mbhalo uphumile, kwaphuma inguqulo yeSoprano 2.9.2, ngakho-ke kuzofanele ukhokhele i-OBS ngokuvakasha okusha.
2. Akukaze kube ngumqondo omuhle ukusebenzisa i-Fedora ecacile nelula nge-KDE. Iya ku http://kde-redhat.sourceforge.net/ bese wenza kusebenze indawo yokugcina yamaYum evela lapho. URex wenza umsebenzi omuhle wokufaka i-KDE iFedora, kepha awuboni okuningi kwayo ngoba imvamisa kuthatha isikhathi ngamaphakeji ayo ukufinyelela ekhosombe eliyinhloko.
3. Sengimanzi kakhulu, ngincome okukhethekile (i-Chakra Linux). Angikaze ngithole i-SuSE ukuthi ingisebenzele kahle kakhulu, futhi kungenxa yokuthi iSuSE ayihambisani kahle, okungenani, nabashayeli bekhadi lami lemifanekiso (konke engikutholayo kungukuphazamiseka kohlelo jikelele), kodwa impendulo engiyitholile okuzwile ukuthi ama-desktops abo e-KDE aphezulu kakhulu.
4. Engizokumanzi nakanjani ukuthi yikuphi ukusatshalaliswa hhayi: Debian. Kwanele ukusho ukuthi uDebian Sid une-KDE 4.8.4 njengenguqulo yakamuva ye-KDE etholakalayo. Kuhle ukuba nezinguqulo "ezizinzile", kepha i-KDE 4.10.2 (yakamuva etholakalayo ye-RHEL, siqhathanisa ukusatshalaliswa okuzinzile nokuzinza) ikunikeza amathanga ayishumi nambili, kanti iDebian Sid, indawo kaDebian "engazinzile", kufanele ibe okungenani ngaphansi kwe-KDE 2.
Uma ufuna ngempela ukufaka i-Debian nge-KDE, izinketho ezimbili ezitholakalayo (faka amakhosombe eZorinOS, noma hlanganisa amakhosombe wokuhlola) umema umsebenzi omningi ngoba yebo, into ehamba phambili kuleso simo ukusula i-hard disk noma i-solid state drive bese ufaka i-CentOS noma iScientific. Ngaphandle kwalokho iqembu likaDebian lalingungqondongqondo weminyaka eyi-1 nohhafu ye-KDE ehamba kancane yabo bonke labo abangazange bahlanganise iStrigi kusuka ezihlahleni ze-git, njengoba bekufanele ngifunde ukukwenza.
UMageia? Cha, ngesizathu esilula: uma sebekhiphe inguqulo ye-KDE, bahlala nayo unomphela. Kwenzeka kimi noMandriva ukuthi kufanele ngiye "eMandriva International Backports" ukuthola ukuvuselelwa kwephuzu, futhi iqembu elingemuva kwe-MIB linqume ukungasekeli iMageia, kepha ukuthuthela ku-ROSA Linux (ngemidwebo ethile ye-Mageia ecacile) . Ngakho-ke uma kungumndeni wakwaMandriva, iROSA Linux iyona ekhetha iMageia.
Ekugcineni, iqiniso lokuthi i-KDE idinga ukuthi ukwabiwa kuhlale kusesikhathini kwenza ukukhishwa kwe-distros kukhanye ngempela. Engingakhetha kukho bekufanele ngisuke eGentoo ngiye ku-Arch nge-KDEmod, bese ngisuka lapho ngiye ngqo eChakra (okuwukuqhubeka ngokomoya kwe-KDEmod), futhi angizisoli. Noma kunjalo, i-Arch Linux ithatha umsebenzi omningi ukuyigcina.
Ngamafuphi, ngokuthanda umbala. Ezimweni eziningi, ukusatshalaliswa okuhle kakhulu kwe-KDE yilokho okusebenzisayo, ngoba ujwayele ama-idiosyncrasies ayo. Kumele wazi ukuthi yikuphi ukusatshalaliswa ongakusebenzisa, futhi, uma usebenzisa ukusatshalaliswa, yini okufanele uyenze ukuthuthukisa ulwazi lwe-KDE (ngokwesibonelo, eSuSE ukushintshela endaweni yokugcina izinto ye-KDE Distro: Ukuzinza kungumqondo ongcono kunokuhlala namaphakheji azenzakalelayo ).
Siyabonga ngempendulo u-Ernesto, ngiphinde ngavivinya ngemiyalo futhi lasebenza kahle, uhlelo luyabonga ngokunethezeka kuzeluleko ozinikezile.
Ngiyethemba uyaqhubeka nalolu chungechunge lwama-athikili ujulisa ukusetshenziswa kwe-Akonadi neNepomuk noma kwezinye izindawo ze-KDE.
Ngiyabonga kakhulu u-Ernesto. Uqinisile, bengilokhu ngiqapha uhlelo ngamamegabhayithi ayi-128 abelwe iNepomuk futhi angiboni mehluko omkhulu ekusebenzeni ngokuqhathaniswa nokucushwa kwami ​​kwangaphambilini.
Ngendlela, i-blog enhle, siyakuhalalisela.
Bengicabanga ukuphendula lapha, kepha ngibone kungcono ukuthi ngithumele i-imeyili kuPablo bese ngiphendula ngenye ikholamu. Ngiyethemba izophuma kungekudala.
I-OpenSuSE ayisenakwenza lutho noNovell. INovell yehlukaniswe ngo-2: ingxenye esele negama yathengwa ngu-Attachmate, kuyilapho iSuSE ibuyele ekubeni yinkampani ezimele kancane.
Funda, ubuza imibuzo eminingana kepha yonke ihlobene.
1. Uma uthatha isinqumo sokuzama ukusatshalaliswa okusha kungcono a) sebenzisa nepomukbackup ukwenza isipele samalebula akho nedatha yangokwezifiso; b) ukufaka ukwabiwa ukuze kuhlolwe njengomsebenzisi omusha; c) buyisela isipele (lokho kungenziwa kokuncamelayo kwesistimu | Usesho lweDeskithophu, iya kuthebhu yesithathu). Ukwenza isipele idatha yangokwezifiso nokufaka kabusha izinkomba kuyo yonke into kuzokunikeza ukufana okusebenzayo "kokuphatheka kolwazi lwe-semantic" oyifunayo.
Ngaphezu kwalokho, esikhathini esithile esedlule, kwakukhona izivivinyo zokubhala omaki beNepomuk kumethadatha yabo (i-EXIF, i-ID3) emuva kumafayili uqobo, kepha awakaqedwa.
2. Ngesizathu esifanayo, umkhawulo omkhulu ukuthi amalebuli awakwazi ukuhanjiswa phakathi kwamakhompyutha, kepha ancike kwimininingwane egciniwe yeNepomuk.
3. Into enhle kakhulu, njengoba ngichazile, ukusebenzisa ukusatshalaliswa okunenguqulo yakamuva ye-KDE. I-KDE 4.10.4 yilokho, futhi noma ikuphi ukusatshalaliswa okungenayo leyo nguqulo akufanelekile. Ngaphandle kwalokho, i-distro engcono kakhulu yokusebenzisa i-KDE yile oyisebenzisayo, lokho njengesimiso esiyisisekelo. Mina ngokwami ​​ngincoma uChakra, ngomphakathi wayo omkhulu okhuluma iSpanishi, ikhwalithi enhle yephakheji yayo ye-KDE, nokuthi wonke amaphakheji ahlanganiselwe iChakra kususwe ukuncika kwawo kwe-GNOME ngangokunokwenzeka, okugwema ukusetshenziswa kwememori okungadingekile futhi kube lula ukwesekwa.
Kufanele usebenzise ukungeniswa kwesipele ngokunakekela ngoba kususa onakho ukushiya obekukhophi, okungenani lokho kwenzeke kimi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule (ngenhlanhla bekuwukufakwa okusha futhi kuthinte amafayela amathathu kuphela). I-Chakra ke engikukhethayo (yize kuhlale kulula ukuba ne-distro elisizayo laphaya ukuxazulula izinkinga ezithile iChakra engakwazi, ngenxa yokushoda kwamaphakeji, njengoba kwenzeka kimi ngethuluzi le-mvconv).
Ngiyabonga ukucaciselwa, ngalowo mqondo ngicabanga ukuthi kungcono ukuqukatha iNepomuk ngaphakathi kwefolda yomsebenzisi ukugwema izinkinga (nginesikhombimsebenzisi sasekhaya esabiwe sawo wonke umuntu lapho izithombe zitholakala komunye umculo onamalungelo okubhala; ukuhlanganisa i-digikam i-database kanye ne-amarok ene-nepomuk kulokhu kuzonikeza izinkinga njalo lapho umsebenzisi eshintsha, ngokwesibonelo, isilinganiso sefayela ngehlengethwa / nepomuk).
Ngenze izincomo zokuphoqa inkomba, ngiyamangala manje ukuthi ngihlola umphumela ngokusesha. Ngicabanga ukuthi bekufanele kuthathe amahora awu-1 kuye kwangama-3 ukukhomba amafayela angama-16.000 (amaningi awo abhaliwe), ngenkathi bengilindele ukuthi kuzothatha amahora ambalwa, amahora amaningi ngaphezulu, kuningi osekuthuthukile selokhu kwakudala i-KDE 4.6 (ngagcina ukuba nakho izamile). Ngijabule kakhulu ngomphumela. Ngizosebenzisa yonke eminye imikhombandlela ngoba ngicabanga ukuthi ngingathola okuningi kulokhu. Ngiyabonga.
Kungakho izinguqulo eziphelelwe yisikhathi ze-KDE 😉 zingasebenzi. Ngeke ngibe nehaba uma ngikutshela ukuthi iNepomuk ku-KDE 4.10 icishe iphindwe ka-20 ijubane leNepomuk ku-KDE 4.6, kanti i-KDE 4.11 ithi iphakathi kwezikhathi ezi-5 nezingu-7 zejubane le-KDE 4.10. Isamba.
Ngisebenzise iGnome iminyaka embalwa futhi nginqume ukuzama i-KDE, benginentshisekelo ikakhulukazi ezinzuzweni ezinikezwa yi-nepomuk. Ngemuva kokulandela okokufundisa kwakho angikwazi ukunika amandla le sevisi.
Ngiwahlolile amabhokisi, nemiyalezo ebhalwe ngokugqamile yile elandelayo:
"Nika amandla i-Nepomuk Desktop Desktop": Izinsizakalo zosesho lwe-Desktop ziyasebenza.
"Yenza kusebenze inkomba yefayela yeNepomuk": Insiza yokukhomba ifayela ayisebenzi.
"Yenza inkomba ye-imeyili isebenze": Ilungele ukukhomba idatha (0%).
Enketho ye- "Imininingwane", khombisa Amafayela: Ukubala nama-imeyili: Kubalwa. Ngikhetha ukuvuselela kepha akwenzeki lutho.
Ungangisiza ngichaze ukuthi kungani ngikwazi ukwenza i-nepomuk isebenze. Ngisebenzisa iSabayon njengohlelo lokusebenza.
Ngibonga kakhulu ngokunginaka nangosizo lwakho.
Izinhlelo zokusebenza ze-Ubuntu Touch ezitholakala ku-Ubuntu 13.10
Qhekeka iphasiwedi yamafayela we-pdf ku-Linux nge-pdfcrack (+ Dictionary)